Usayizi 6.81 MB
Play 4 526
Omunye add-on esikhulu enophephela emhlane owaziwa ohlongozwayo by Virtavia, owayekade payware, lokhu add-on waba freeware e 2014. Afakwe nge 3D gumbi and VC, inkambiso Izikali nemisindo, animations, repaints amahlanu, tinkhulumo ezimbili. HC3 kanye HM1.
Ukufinyelela inguqulo ye FSX & P3D Chofoza lapha
Ngo 1977, the Ministry UK wezokuVikela wakhipha imfuneko i Kwakuhlale kuba khona impi anti-ngwenya yokuhlasela yebutho (ASW) helicopter buyisela Westland oLwandle AmaKhosi the Royal Navy sika, okuyinto base beba asisifanele kwentuthuko Soviet submarine technology. Westland Helicopter waqoqa isiphakamiso, designated WG.34, ngoba indiza ezintathu-engined of Ubukhulu elifana oLwandle King; the WG.34 kwaba ukufaka okuzimela xaxa futhi abuye acale kuneyokuqala. Ngesikhathi esifanayo, Navy Italian (Marina Militare), naye ngokucabangela esikhundleni izimoto zawo of Sea AmaKhosi wakha yinkampani Italian Agusta; Westland futhi Agusta ngokushesha baqala izingxoxo mayelana nokuthuthukiswa ahlangene indiza enophephela emhlane owalandela.
Agusta futhi Westland esingakaphothulwa isivumelwano lo msebenzi ndawonye, ​​futhi kwakheka ngokuhlanganyela-owned inkampani entsha, EH Industries Limited (Ehi), ukuze aphishekele ukuthuthukiswa kanye nokumaketha endizeni entsha ukuze opharetha ezingaba khona. On 12 June 1981, uhulumeni UK ukuqinisekisile iqhaza layo kule phrojekthi, esabiwe isabelomali sokuqala of £ 20 million ukuthuthukisa ayisishiyagalolunye izibonelo pre-chungechunge. Isivumelwano ezinkulu, okuyinto sewuthole izimali ngoba iningi Uhlelo EH101 lokuthuthukiswa, esasayinwa ngo-kokubili ohulumeni British and Italian ku 1984. Ngesikhathi 1985 Paris Air Show, Agusta wabonisa a bhinqa-up version Umbuso indawo ye ndiza, okuholela umklamo generalized more ezingaholela egcizelele ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ahlukahlukene ezamasosha noma wezempi. Sibonelo wokuqala landizela on 9 Okthoba 1987.
Ngo 1987, Canada kwase akhethiwe EH101 ukuba buyisela yabo AmaKhosi Sea anti-ngwenya yokuhlasela yebutho nempi ukucinga ayokhipha izindima; Injini the EH101 yesithathu ukuzimela anda kuqhathaniswa bahlabeke ngokumelene nezimbangi ezifana Sikorsky Seahawk, uhla yayo kanye de-uqweqwe lukashukela ukwazi abangu kuyabonakala kubaluleke ngezinga elifanayo eNyakatho Atlantic imisebenzi. I EH101 elisafufusa, okuyinto kuze kufinyelele 50 ayesezibhebheni ukuze ithathe isikhundla Canadian Armed Forces sika (CAF) Sea AmaKhosi, wazithola kuncike empini kwisizwe sonkana lezombusazwe phakathi amaqembu Conservative futhi Liberal, lona wamuva kokubuka le ndiza njengokuwukulahlekelwa okukhulu kakhulu. Abagxeki bahlasela ukuthengwa EH101 njengoba ngokweqile futhi okungadingekile ngemva kokuphela kweMpi Yomshoshaphansi sika in the 1990s zakuqala. Wide-esukela izindleko ulinganisela ukuthi banikezwe kokubili wabasekeli kanye nezitha EH101 zokuthenga, nalaba baphikisi usisekela ukuphila izandiso of Sikorsky CH-124 Sea iNkosi futhi Boeing Vertol CH-113 Labrador helicopter mabutho. I EH101 impikiswano wawubhekwa njengophawu isici 1993 Canadian ukhetho sikahulumeni. Umyalelo sahoxiswa nguhulumeni omusha Liberal e 1993 kuphumele $ 470 million Imali yokukhansela. (Wikipedia)
Hip okufushane Mi-8MT 4.1 FS2004